ယာဉ်​မ​တော်​တဆဖြစ်​ပွားပြီး ​ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​ ပျံလွန်​​တော်​မူ - Cele Platform
အောက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်နေ့နံနက်(၀၉ ၁၀) နာရီ ချိန်. နပတ-မတလ လမ်း မိုင်တိုင် ၃၁၀/၃- ၃၁၀/ ၄ဖာလုံးကြား 1p/7779. Lexus အနက်ရောင် ကျောက်ဂူဆရာတော်ပါ ယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်နိုင်ဘဲ လမ်းဘေးမြေသားတောင်စောင်းဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ယာဉ်ပေါ် ကျား ၄ဦး အနက် ၁ဦးသေ ဆုံး ပြီး ကျောက်ဂူဆရာတော်. ဒဏ်ရာ(စိုးရိမ်ရ) ရရှိသဖြင့်. အမြန်လမ်းမကြီး. ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြင်စည် စခန်းတပ်ဖွဲ့များ. ကူညီရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါကား​ပေါ်မှာ လိုက်​ပါစီးနင်းသူ​လေးဦးပါရှိပြီး ယာဉ်​​မောင်းဖြစ်သူကတော့ အခင်းဖြစ်နေရာမှာတင် သေဆုံးခဲ့ကာ ဆရာ​တော်​အပါအဝင်​ အမျိုးသား၂ဦးစိုးရိမ်ဒဏ်​ရာပြင်းထန်​စွာရခဲ့တာ​ကြောင့်​ မန္တ​လေးပြည်​သူ့​ဆေးရုံကြီးကို ပို့​ဆောင်​​ပေးထားပြီးဖြစ်​တယ်​လို့ ပြင်​စည်​ရဲကင်းစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်​ဦးကဆိုပါတယ်​။
၀၉ ၅၀ ချိန် ဆရာတော် ပျံလွန် တော် မူပါသည်။
Source. အမြန် လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး
အောကျတိုဘာလ(၁၈)ရကျနေ့ နံနကျ(၀၉ ၁၀) နာရီ ခြိနျ. နပတ-မတလ လမျး မိုငျတိုငျ ၃၁၀/၃- ၃၁၀/ ၄ဖာလုံးကွား 1p/7779. Lexus အနကျရောငျ ကြောကျဂူဆရာတျောပါ ယာဉျသညျ အရှိနျမထိနျနိုငျဘဲ လမျးဘေးမွသေားတောငျစောငျးဝငျတိုကျမှုဖွဈပှားခဲ့ပါသညျ။
ယာဉျပျေါ ကြား ၄ဦး အနကျ ၁ဦးသေ ဆုံး ပွီး ကြောကျဂူဆရာတျော. ဒဏျရာ(စိုးရိမျရ) ရရှိသဖွငျ့. အမွနျလမျးမကွီး. ရဲတပျဖှဲ့ ပွငျစညျ စခနျးတပျဖှဲ့မြား. ကူညီရှငျးလငျးဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ။
အဆိုပါကားပျေါမှာ လိုကျပါစီးနငျးသူလေးဦးပါရှိပွီး ယာဉျမောငျးဖွဈသူကတော့ အခငျးဖွဈနရောမှာတငျ သဆေုံးခဲ့ကာ ဆရာတျောအပါအဝငျ အမြိုးသား၂ဦးစိုးရိမျဒဏျရာပွငျးထနျစှာရခဲ့တာကွောငျ့ မန်တလေးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးကို ပို့ဆောငျပေးထားပွီးဖွဈတယျလို့ ပွငျစညျရဲကငျးစခနျးမှ ရဲအရာရှိတဈဦးကဆိုပါတယျ။
၀၉ ၅၀ ခြိနျ ဆရာတျော ပြံလှနျ တျော မူပါသညျ။
Source. အမွနျ လမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး